Adeegyada Naqshadeynta gudaha Mareykanka
Adeegyada Naqshadeynta gudaha New York City
Adeegyada Naqshadeynta gudaha New York
Adeegyada Naqshadeynta gudaha Anchorage
Adeegyada Naqshadeynta gudaha Alaska
Shirkadda ugu Weyn Shopify Development Company India - THINKTANKER
Ma Raadineysaa Shopify Shirkadda Horumarinta eCommerce? Haddii aad raadineyso xalka saxda ah, waa inaad heshaa ilo horumarineed oo aqoon leh. Ka hel xalka horumarinta caalamiga ah ee dukaamaysiga eCommerce ee "THINKTANKER"; waa shirkad horumarineed oo eCommerce ah oo mid ka mid ah bixisa a...
Waxa daabacay thinktanker01
arag Adeegyada Naqshadeynta la daabacay 2 years ago
HR-raqiis iyo Software-ka Mushaharka ee Dubai - Wac # 0527081010
Barnaamijka Zapio HR wuxuu kuugu keenayaa aragtidaada shabakad si buuxda loo habeeyay HRMS oo ku taal Dubai. Zapio HR iyo Mushaharka Mushaharka ayaa ujeedkoodu yahay in lagu gaaro taabasho shaqsiyeed iyo dhameystir ku qanacsanaanta macaamilka ee ku saabsan mid kasta oo ka mid ah HRMS iyo xirmooyinka...
Waxa daabacay zapio
Hel Xalka Naqshadeynta BIM ee ugu Fiican
Dooxada Silicon waa shirkad CAD salka ku heysa oo ka shaqeysa ISO oo bixisa adeegyo qeybaha kala duwan ee injineernimada. Waxaan haynaa koox xirfadlayaal iyo injineero ah si aan u siino adeegyo tayo fiican leh dhinac walba. Kooxdayada heeganka ah waxay bixisaa Adeegyada Qaabeynta Macluumaadka Dhisma...
Waxa daabacay SiliconInfom
arag Adeegyada Naqshadeynta la daabacay 4 years ago
Hel Kharashka Adeegyada Farsamada Farsamada ee Farsamada iyo Tuubooyinka
Silicon Valley waa shirkad sumcad leh oo u fidisa macaamiisheeda adeegyo farsamo, koronto iyo tuubooyin / dhuumaha (MEP) maahan oo keliya Hindiya laakiin sidoo kale dalal kala duwan oo adduunka ah. Waxaan aaminsanahay in aan bixinno adeegyo MEP tayo leh oo la hubiyay si loo ilaaliyo sharafta iyo sha...
manhattanshades daaweynta daaqada
Manhattan Shades waxay xiriir aad u adag la leeyihiin soosaaraasheena waxaanna ka faa'iideysaneynaa muggeena si aan u gaarno qiimayaasha jumlada aadka u hooseeya. Waxaan qaadnaa xariiq dharkeena ah waxaanan qabanaa dhamaan shaqada oo dhan oo ku lug leh dhammaan baahiyahaaga dharka ah ee ka imana...
Waxa daabacay Manhattan Shades
arag Adeegyada Naqshadeynta la daabacay 5 years ago
Naqshadeynta waa abuurista qorshe ama heshiis loogu talagalay sameynta shay, nidaam ama is dhexgalka aadanaha ee la cabiri karo (sida qaab dhismeedka qaab dhismeedka, sawirrada injineernimada, hannaanka ganacsiga, jaantusyada wareega, iyo qaababka tolidda).  Naqshaddu waxay leedahay macno kaladuwan oo ku saabsan laamo kaladuwan (ka eeg naqshad naqshadeynta xagga hoose). Xaaladaha qaarkood, dhismaha tooska ah ee shayga (sida dheriyada, injineernimada, maareynta, koodh-garaynta, iyo naqshada garaafka) waxaa sidoo kale loo tixgeliyaa inay isticmaalaan fikirka naqshada. Naqshadeynta naqshadeynta badanaa waxay ubaahantahay tixgalinta bilicsanaanta, shaqada, dhaqaalaha, iyo dhinacyada dhaqan ahaan labadaba sheyga naqshadeynta iyo hanaanka naqshadeynta. Waxay ku lug yeelan kartaa cilmi-baaris ballaaran, fikir, moodello, is-dhexgal, iyo dib-u-qaabayn. Dhanka kale, noocyo kala duwan oo walxaha ah ayaa la naqshadeyn karaa, oo ay ku jiraan dharka, qalabka is-dhexgalka ee garaafka leh, cirka sare, aqoonsi shirkadeed, geedi socodyada ganacsiga, iyo xitaa habab ama habeynta naqshadaynta.  Markaa “nashqadeynta” ayaa laga yaabaa inay tahay tilmaan muhiim ah oo loo tixraacayo diidmada guud ee shay abuurka ama waxyaabaha (naqshadaynta shay), ama ficil loogu talagalay geedi socodka abuuritaanka sida lagu caddeeyay macnaha naxwe ahaan. Waa ficil hal abuur iyo hal abuur.